Ngwaọrụ Pdr, Kit Pdr, Ngwaọrụ Pdr Car, Ngwaọrụ Pdr Ngwaọrụ - KWES BR B KWES .R.
Ngwaọrụ JUSTBETTER na-agbaso ụkpụrụ nke ọnụahịa, ogo, ọrụ na iguzosi ike n'ezi ihe mgbe niile. Daalụ maka ntụkwasị obi na nkwado gị. Anyị ga-eji obi eziokwu, obi eziokwu, ịnụ ọkụ n'obi na-ejere onye ọ bụla ozi.
AKW PRKWỌ AKWOFKWỌ AKWOFKWỌ AKWOFKWỌ
Afọ 10 nke Mbupụ
Ahụmahụ R&D NA AKA AKA
Shanghai Just Better tools Co., Ltd guzobere na 2010 wee zoo na NO.328 YangYue, YangWang Industral Park, mpaghara FengXian, Shanghai, China. Just Better tools are intergrated with development, n'ichepụta, ahịa Dept, Anyị ọkachamara a zuru ezu nso nke muta ngwaọrụ, akpaaka ngwaọrụ na yiri ngwaahịa. Ngwaahịa anyị na-ebupụ n'akụkụ ọ bụla nke ụwa.
PDR ụgbọ ala mmezi ngwá ọrụ Professional push nko nko Rods door ding tool for Non-trace repair. Mere si elu àgwà igwe anaghị steelor ​​alloy ígwè, inogide iji inupụ uche dị na-enweghị ekwe ma ọ bụ na-agbasa.
Ọrụ nke PDR Ngwaọrụ dị mfe, ọkachasị onye ọ bụla nwere ike ịrụ ọrụ. Nyere gị aka ịchekwa oge, mbọ na ego. Na Ọ dịghị emebi agba na ahụ.
PDR Professional Ngwaọrụ Nịm 8pcs Push nko Rods ...
8 PC PDR Rod Set
White Bridge duru puller Kit N'ihi Car zọchara Repai ...
Car Mmezi Bridge Ngwá Ọrụ Idozi Mmezi Tools Pullin ...
4pcs HSS Cobalt Abù Weld malite ịgba Set
Wiper Arm Arm Removal Ngwá Ọrụ
8pcs Wiper Ogwe aka mwepụ Set
Ọ bụ ọsọ maka ụgbọ ala ịdaba na sag na usoro ojiji. Ihe mbụ ọtụtụ ndị nwe ụgbọ ala na-eche bụ imezi onwe ha. N'oge a, ha kwesịrị iji aka nke ụgbọ ala rụzie. The car puller maka sag idozi bụ ọnụ na-adaba adaba na u ...
PDR, nke a makwaara dị ka Ngwongwo Ndozi Ncha Paintless, na-akọwa usoro iji wepu obere dents na ozu ụgbọ ala. Dị ka ogologo dị ka agba elu bụ emebibeghị, na agba free nkụ mmezi nwere ike iji rụkwaa nile di iche iche nke mmebi. Ma aluminom na ígwè efere nwere ike idozi bú ...
Na United States, Japan, Korea na mba ndị ọzọ mepere emepe, teknụzụ eji agba agba agba agba agba agbazigharịla. The omenala mpempe akwụkwọ metal idozi usoro na-mfe site na iji technology nke dịghị agba sag idozi, na agba mmiri en ...
Dent idozi mbụ mepụtakwara site Germany. Ọtụtụ ndị na-emepụta ụgbọala ejirila ụdị teknụzụ rụzie ụgbọala ndị mebiri emebi n'oge nyocha ụlọ ọrụ. A na-apụghị izere ezere na usoro nke iji ụgbọ ala. Site na usoro nke ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na ngwa ọrụ mmiri, ski ...